fiarovana ny ankohonany sy ny mpiara-monina ary ny firenena iray manontolo.
Tsy mahita tory, manonofy ratsy
Raim-pianakaviana iray nifandray tamina mpizahantany vahiny ny 14 martsa teo no fantatra fa nandeha teny Anosiala avy hatrany tsy mba afaka nody sy nanao veloma ireo vady aman-janany akory noho ny fitiavany ny ankohonany sy ny mpiray Tanindrazana aminy. Mafy ilay fitokana-monina raha araka ny fanazavany. Efitrano iray lehibe no hipetrahan’ny olona iray ary tsy misy afa-tsy izy irery no tao anatiny. Matahotra ihany koa anefa raha vao mivoaka satria olona mihiboka avokoa no manodidina ny tena hany ka tonga avokoa ireo karazana tebiteby sy krizy maro samihafa. Amin’ny alina anefa mbola tsy mahita tory ihany koa ny tena hoy hatrany izy no sady manonofy ratsy.
Tebiteby sy adin-tsaina
Voatsakotsako avokoa ny segondra niainany rehetra tao anatin’ny tontolo andro miampy ny tebiteby amin’ny fivoahan’ny valin’ny fitiliana natao. Ny hypocalcemie mantsy no niteraka ny harerahana sy ny maripana niakatra ho 37.8 ◦C nahatonga ity Raim-pianakaviana ity nanana ahiahy tamin’ny fahasalamany saingy ny ampitson'ny nahatongavany teny Anosiala ihany dia nihafana izany ary nidina ilay mari-panany. Ara-dalana ny sakafo raha araka ny fanazavany saingy ny hataon’ireo mpitsabo no misy tsy ara-dalana. Matetika mantsy no tsy tonga izy ireo mandritra ny roa andro hany ka ilay marary indray no voatery miantso raha misy zavatra tsy metimety. Herinandro aorian’ny fitazonana moa dia hafindra toerana ilay olona ahiahiana ka ho an’ity Raim-pianakaviana iray ity dia tany amina hôtely lehibe iray indray no nametrahana azy niandry ilay herinandro faharoa. Nivoaka ihany koa ny valin’ny fitiliana nataony taorian’izany izay samy “negatif” avokoa ka nisaotra an’Andriamanitra izy no sady faly mihaona velona indray miaraka amin’ireo ankohonany ihany koa.